Zvitoro, maresitorendi, mabhizimisi emabhizimisi ... Mashandiro anoita Hotel Dieu achashandurwa - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU »Shops, cafés, business incubator ... Sei iyo-Hôtel-Dieu ichashandurwa
Public Assistance-Hôpitaux de Paris musi weChishanu yakasarudza purojekiti yemuvakidzani wekugadzira mahofisi Novaxia kugadzirisa nzvimbo yeParis, pedyo neName Dame.
NaGrégoire Allix Yakatumirwa zuro pa 22h12, yakadzorerwa pa 02h06
Nguva yeku Kuverenga 4 min.
Inerial view of Novaxia real estate developer project yekugadzirisa Hotel-Dieu. Novaxia
PaI Île de la Cité, Hôtel-Dieu ichakurumidza kusava chipatara chete. cafes uye resitorendi tenuka pavazhe, ine bindu wakazaruka kune promenade, zvitoro ... Pedyo akakuvadza petemberi kuti Notre Dame, muvakidzani wayo wakaoma uye akanaka ari kugadzirira kunoshamisa makeover.
Public Runobatsira Zvipatara kweParis (AP-HP), muridzi nzvimbo iyi 2,2 hectares pakati Church yaiungana uye wepachiteshi chacho ainzi of Seine, achavimba kupfuura wechitatu voga vanoita. Musi weChina 16 inogona, iyo juri rinotungamirirwa nemutungamiriri mukuru we AP-HP, Martin Hirsch, akasarudza boka iro rinofanira kudzorerazve nzvimbo iyi yezvipatara.
WeNobel runhare kuti vaitaura, chaicho pfuma yokuvaka Novaxia vachabatsirwa chivako risi titarisire kushandiswa 21 000 mativi metres kumuganhu Church yaiungana kwemakore masere, kubhadhara zvachose rendi mamiriyoni 144 euros. Kusanganisira mabasa, iyo inotora mari inosvika ku300 mamiriyoni emamiriyoni. "Tiri mapenzi nekuda kwemufaro, inzvimbo yezvakaitika, chivako cheParis"anokoshesa Joachim Azan, mutungamiri weNovaxia.
Kutevedzera muenzaniso wemakwikwi eReinventer Paris, purogiramu yacho yakanga isina rusununguko uye avo vakaganirwa vakakokwa kuti vagadzire mapoka anoungana pamwe vanosimudzira, vatengesi, vanogadzirisa, vashandi, kurongedza zviripo uye kupa mari. Nzvimbo iyi yaive nemafungiro: Novaxia yakakunda Bouygues, Eiffage, Emerige uye Quartus. Akasikwa 2006, kambani akasangana exponential kukura (223% pakati 2014 uye 2017) kushandisa zvivako kubudiswa uye kugadzira nzvimbo dzakaoma.
"Tatsvaga kugadzira nzvimbo yechitsinhanho, kuti tive nekusiyana-siyana kwepasi pose kusangana uye kwete kungoita juxtapose matanda akawanda"rinotsanangura VaAzan.
Around matatu nezvivanze zvakakura uye sebindu Hotel-Dieu maberere mudungwe pamwe Florentine namaberere Novaxia anoronga kuisa parutivi 2025 matatu mabhizimisi, maererano kuvaka facelift kubudikidza akitekiti Anne Démians nerubatsiro rwemukuru wezvigadzirwa zvezvigadzirwa zvekare zvemapurisa Pierre-Antoine Gatier.
I-Hôtel-Dieu haisi kusarudzwa, asi kuswedera kweTe-Dame kunouisa pasi pekutonga kwevakadzi vezvivako zveFrance (ABF). MunaJanuary, jweta rekutanga rakadzorera avo vakagadzirira kubhodhi ravo nekuda kwekutora rusununguko rukuru nechokuyeuchidza.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/05/17/commerces-cafes-incubateur-d-entreprises-comment-l-hotel-dieu-va-etre-transforme_5463694_3224.html